Gọvanọ Batman Şahin Raybus kwuru na 'Ọchịchọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ihe a chọrọ' - RayHaber
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region72 BatmanGọọmentị Batman Şahin Raybus maka 'uche ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ihe ọ dị mkpa' ka o kwuru
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 72 Batman, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, Ala nke Anatolia Region, General, Isi akụkọ, Turkey 0
Onye isi batman sahin kwuru na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-akwado raybus
Gọvanọ Batman Hulusi Şahin kwupụtara echiche ya banyere mkpọsa anyị bidoro ịgbanwe okporo ụzọ ụgbọ oloko ka ọ bụrụ ụzọ ụgbọ oloko n'okporo ụzọ Batman Diyarbakır.
Railgbọ okporo ígwè Batman Diyarbakir ga-ebelata ọnụọgụ na mmetọ ikuku, ụmụ amaala ga-echekwa ego dị n'okporo ụzọ, nchekwa, ohere na ọnụ ala maka njem ụgbọ oloko, anyị bidoro mkpọsa mbinye aka a, Gọvanọ Sahin kwupụtara echiche ya n'okwu a. Gọvanọ Şahin, na-ekwusi ike na Raybus bụ oru ngo nke enwere ike itinye ya na oke ochichi "The Republic of Turkey State Railways, ihe alụmdi na ọnwụ. Lọ ọrụ na-arụ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ maka ego. Ya mere, ọ bụrụ na uche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-eme n'okwu a ga-ekwe omume. Emere nke a na Ankara. Na-ekwukarị na Batman enweghị nsogbu. Ọ bụ ezie na Batman abụghị n'ezie? Anyị kwesịrị ịkpọ oku dị mma Ş o kwuru. (Batmansonsöz)
Nkwekpe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-aza site na TCDD ka BTS 28 / 11 / 2014 Nkwekpe ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na TCDD na BTS: Ndị ọrụ ụgbọ njem nke United Transport (BTS) mere nzukọ na General Directorate nke Turkish State Railways na-esochi Ankara njem megide njichi nke ụgbọ okporo ígwè na ikike grabs. Otu onye nnọchiteanya KESK Secretary General Hassan Toprak na ndị BTS so na ndị isi ọrụ TCDD bụ Süleyman Karaman na-eziga arịrịọ. Òtù ahụ, bụ nke nyere nkwupụta mgbe nzukọ ahụ kwusịrị, kwuru na ndị ọrụ ndị bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ka a na-ezigara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na na ha bụ "ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị, anyị agaghị ekwe nkwa". Na nkwupụta nke njikọ ahụ gbasara nyocha ahụ, 1 ga-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ kemgbe January 2015 anya
MHP President Provincial kwuru Raybüs 25 / 04 / 2019 MHP onyeisi obodo nke Batman Mehmet Açık, ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè Batman-Diyarbakır na okporo ụzọ okporo ụzọ na-eduzi mkpọsa nke akwụkwọ akụkọ Batmansonsöz bidoro, nke na-akwado site n'ịbanye. N'ọ ụgbọ okporo ígwè Batman-Diyarbakır, anyị amalitela ịbanye maka mgbanwe nke okporo ụzọ ụgbọ oloko na ntinye ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke dị ala. Anyị ga-anapụta ntinye aka anyị natara n'ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ anyị na General Directorate nke State Railways. Ọ bụ ezie na mmasị na mgbasa ozi anyị amụbawo kwa ụbọchị, MHP Batman Provincial Administration akwadowokwa mgbasa ozi anyị site na ịga na akwụkwọ akụkọ anyị. Acik, onye kwadoro ma kwado mgbasa ozi anyị, ga-amasị ịkele gị maka mgbasa ozi ị rụpụtara maka abamuru nke ndị Batman. okporo ụzọ okporo ụzọ ga-ebelata okporo ụzọ ụgbọala na Batman-Diyarbakır railway, Batman ...
Raybüs echebere maka Batman-Diyarbakır 02 / 05 / 2019 Mgbe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ndị Batmansonsöz haziri ahazi, enwere ike ịchọta ihe ọmụma maka usoro maka usoro okporo ígwè nke nwere mmetụta dị ukwuu na echiche ọha mmadụ banyere Batman na Diyarbakır. Dị ka ebubo, agbụrụ Batman-Diyarbakir gụnyere n'ime atụmatụ ụgbọ ala ahụ, ma ọ bụ n'ihi na ọ bụghị ịmalite ọrụ a ka a kwagara Malatya. BATMAN NA DIYARBAKIR MỤRỤ RAYBUS Kwa ụbọchị, na Batman Diyarbakır okporo ụzọ, nke ọtụtụ puku mmadụ 15 na-eji, anyị mere ka anyị gbanwee ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ okporo ígwè. Nkwado maka mbinye aka mpempe akwụkwọ anyị na-ebu maka ụgbọ ala nke ga-ebelata ọnụ ọgụgụ ụgbọala na mmetọ ikuku na Batman-Diyarbakır Road ma nye nchebe, njem ngwa ngwa na njem ọnụ ala abawanyela. Ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Zonguldak-Karabük, Çatal-Tire, Kars-Akyaka, Malatya-Elazığ, dị na ...
Ali Şahin, Gọvanọ Giresun, hapụrụ Nkwekọrịta maka Ịtali 04 / 04 / 2012 Giresun Governor Dursun Ali Sahin, Giresun Castle na mere ikwu na zubere cable ụgbọ ala oru ngo-a na-egbu oge ruru ka ihu ọma nke Italian ụlọ ọrụ, "ndị Gris na ndị Ịtali bụ ndị mara mma ume ngwu. N'ezie, ha adịghị ka mba Turkey. Ọ ga-akpọ ngwá ọrụ site na ebe ha nọdụrụ ala, egwu egwu ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ ya. M kwụsịrị ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ a Na Gọvanọ Nzute Ụlọ Nzukọ nke Ógbè Assembly Dursun Gọvanọ nke Giresun na-ekere òkè nzukọ Ali Sahin, na-ekwu na-aga n'ihu ọmụmụ inwale obodo njem nwere, Giresun Castle kwuru okwu banyere zubere cable ụgbọ ala Ndinam. The cable ụgbọ ala oru ngo nwere obibi 2 ọnwa kwuru na Governor Sahin, kwuru, sị nkwekọrịta mere na Italian ụlọ ọrụ nsogbu ha bi. ...
Giresun Gọvanọ Sahin Teleferik kwuru na ọrụ ahụ na-eru nso ọgwụgwụ 05 / 07 / 2013 Giresun Governor Sahin cable ụgbọ ala ime ihe na gọvanọ kwuru ikpeazụ bịakwutere kwuru na nso ọgwụgwụ ọmụmụ metụtara cable ụgbọ ala Sahin, "The obi dossier na-akwadebe site Mee-arụ ọrụ-nyefe nlereanya. Nke a process'm agbalị Almost 1,5 afọ. Ọ bụ adịghị mfe. Nke a na omenala akụ wee ugboro atọ ruo Board. ma n'ikpeazụ, m mere ka. m na-atụ anyị na nnukwu ụlọ si Gemilerçekeg, 119 mita elu, 1280 mita n'ogologo ga-arụnyere na a USB ụgbọ ala azụmahịa. ma i nwere ike na-ebili na a USB ụgbọ ala nkeji ise. " o kwuru okwu.
Ali Şahin, Gọvanọ nke Giresun, Bilie si ụlọ ọrụ Ịtali maka Teleferik 04 / 04 / 2012 Giresun Governor Dursun Ali Sahin, Giresun Castle kwuru mere atụmatụ cable ụgbọ ala oru ngo-a na-egbu oge ruru ka ihu ọma nke Italian ụlọ ọrụ, "ndị Gris na ndị Ịtali bụ ndị mara mma umengwụ ndị mmadụ. N'eziokwu nke ahụ na-adịghị ka Turkish mba. Ga-egwu ngwá si ebe ha na-anọdụ, na na na ga ịṅụ gị ọṅụṅụ. Nke a na ụlọ ọrụ Anaghị m arụ ọrụ, "ka o kwuru. Na Gọvanọ Nzute Ụlọ Nzukọ nke Ógbè Assembly Dursun Gọvanọ nke Giresun na-ekere òkè nzukọ Ali Sahin, na-ekwu na-aga n'ihu ọmụmụ inwale obodo njem nwere, Giresun Castle kwuru okwu banyere zubere cable ụgbọ ala Ndinam. The cable ụgbọ ala oru ngo nwere obibi 2 ọnwa kwuru na Governor Sahin, kwuru, sị nkwekọrịta mere na Italian ụlọ ọrụ nsogbu ha bi. ...
Samsun Gọvanọ Şahin Ụgbọ okporo ígwè dị elu aghaghị ịbụ 27 / 10 / 2014 Samsun Gọvanọ Şahin Ụgbọ okporo ígwè dị elu aghaghị ịbụ: N'ikwu okwu na Summit of Economy na Samsun Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin, "Samsun ga-ezute ụgbọ okporo ígwè dị elu. Nke a bụ ụzọ dị mkpa isi na-ebugharị ga-esi metụta Samsun," ka o kwuru. N'ikwu okwu na Economic Summit na Samsun Gọvanọ Samsun Ibrahim Sahin, Ngwaọrụ ga-abụ nnukwu uru na obodo nke Samsun, o kwuru. Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin Samsun nwere ike ịbanye n'Oké Osimiri Ojii 4 kwuru, sị, "Akụrụngwa bụ echiche anyị ga-anụ karịa ugbu a n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị atụlee na azụmahịa ahụ na-amụba 15-20 pasent kwa afọ, echere m na ndị ahịa ahụ ga-ewere dollar 360 dollar US. a ...
Samsun Gọvanọ Sahin ga-ahazi njem ụgbọ oloko dị elu na Ankara-Konya 15 / 04 / 2015 Samsun Governor Sahin, Ankara-Konya mezie elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè njem: Samsun Governor Ibrahim Sahin, Samsun-Ankara n'agbata na akuko banyere ọsọ ụgbọ okporo ígwè oru ngo Ankara-Konya High Speed ​​Train akara mezie na-na saịtị nnyocha njem. Samsun Governor Ibrahim Sahin, Samsun-Ankara ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè oru ngo n'agbata na akuko banyere Ankara-Konya High Speed ​​Train akara ga hazie na-na saịtị nnyocha njem. Abraham Sahin, onye ochichi Samsun, ga-eduzi usoro okporo ụzọ okporo ụzọ Ankara-Konya na ndị otu akuko na Samsun.
Ozi di oke mkpa maka uzo di elu si n'aka Samsun Gouvernyen İbrahim Şahin 05 / 08 / 2015 Samsun Gọvanọ İbrahim Şahin Ozi dị mkpa maka usoro ọsọ ọsọ ọsọ: Samsun Gọvanọ İbrahim Şahin mere nkọwa dị mkpa banyere usoro ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Ankara na Samsun. Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin, ụgbọ oloko dị elu aghaghị ịbịakwute Samsun, ka o kwuru. Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin, n'oge na-adịbeghị anya, zutere ndị òtù ụlọ ọrụ na-etinye aka na njem ụgbọ oloko dị elu site na Ankara ruo Konya. Obodo ukwu Samsun nke nwere mmekọ na ndị òtù ụgbọ okporo ígwè dị elu Café Café Ibrahim Sahin Gọvanọ nke Samsun, mekwara ka ụfọdụ ndị na-akatọ ndị òtù ụlọ ọrụ na-etinye aka na njem ahụ. ANYỊ NA-EBE EKWỤKWU NDỊ NA-EKWU NDỊ NA-ECHICHE ...
Samsun Governor Ibrahim Sahin Samsun-Ankara High Speed ​​Train Description 30 / 09 / 2015 Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin Samsun-Ankara High Speed ​​Train Description: Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin, Samsun-Ankara, nkwụsị n'etiti Samsun na Ankara 2 awa ga-ekwuputa na ebe dị n'etiti ụgbọ okporo ígwè ahụ. Samsun Gọvanọ Ibrahim Sahin, Samsun-Kalin ọrụ mmezigharị ụgbọ okporo ígwè, mbụ ntanye mmegharị ụgbọ okporo ígwè na okwu ya dọtara uche gaa na Samsun-Ankara ngwa ngwa ụgbọ oloko. N'okwu mmeghe ya n'ememe gọọmenti nke Samsun Ibrahim Sahin, usoro Samsun-Kalin Railway rụchara, ọ ga-eme ka okporo ụzọ na njem na njem dị mfe, ka o kwuru. SAMSUN-ANKARA KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ NA-AGBANYE ỌGWỤKWU abụọ Gọọmenti bụ Ibrahim Sahin, "a ga-eji aka na-eme ihe site na EU ga-amalite iwu ụlọ ahụ.
Batman Diyarbakır njem ụgbọ ala
Nkwekpe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-aza site na TCDD ka BTS
Giresun Gọvanọ Sahin Teleferik kwuru na ọrụ ahụ na-eru nso ọgwụgwụ
Samsun Gọvanọ Şahin Ụgbọ okporo ígwè dị elu aghaghị ịbụ
Samsun Gọvanọ Sahin ga-ahazi njem ụgbọ oloko dị elu na Ankara-Konya
Ozi di oke mkpa maka uzo di elu si n'aka Samsun Gouvernyen İbrahim Şahin